Kukanganisa Kutenda Kwevamwe Uye Zvokuita Kana Hama Yaita Chivi | Upenyu hwaJesu
MATEU 18:6-20 MAKO 9:38-50 RUKA 9:49, 50
ANOYAMBIRA NEZVOKUKANGANISA KUTENDA KWEVAMWE
ZVOKUITA KANA HAMA IKAITA CHIVI
Jesu achangobva kushandisa mufananidzo kuti vateveri vake vaone kuti vanofanira kuzviona sei. Vanofanira kuzviona sevana vaduku, avo vanozvininipisa uye vasingafungi nezvechinzvimbo. Kana vadzidzi ‘vakagamuchira vana vaduku ivavo nokuda kwezita rake vanenge vagamuchirawo iye Jesu wacho.’—Mateu 18:5.
Vaapostora vanga vachiitirana nharo nezvokuti ndiani mukuru kune vamwe, saka vanogona kunzwa mashoko aJesu sekuvatsiura. Saka muapostora Johani anobva achinja nyaya nokutaura zvimwe zvichangobva kuitika achiti: “Taona mumwe murume achidzinga madhimoni achishandisa zita renyu uye taedza kumudzivisa, nokuti haasi kukuteverai pamwe chete nesu.”—Ruka 9:49.
Johani ari kuona sokunge vaapostora ndivo voga vane mvumo yokuporesa vamwe kana kuti yokudzinga madhimoni here? Ko kana zvakadaro murume wechiJudha uyu ari kubudirira sei kudzinga madhimoni? Kunenge kuti Johani ari kufunga kuti murume uyu haafaniri kuita zvishamiso nokuti haasi kufamba naJesu nevaapostora.
Johani anoshamiswa nemashoko aJesu okuti: “Musaedza kumudzivisa, nokuti hapana munhu angaita mabasa esimba nezita rangu angakurumidza kundituka; nokuti asingapesani nesu ndowedu. Nokuti munhu wose anokupai kapu yemvura yokunwa nokuti muri vanhu vaKristu, chokwadi ndinokuudzai kuti, haangamborasikirwi nomubayiro wake.”—Mako 9:39-41.
Iye zvino murume uyu haafaniri hake kufamba naKristu kuti zvinzi ari kurutivi rwake. Hakusati kwava neungano yechiKristu, saka hazvirevi kuti kana murume uyu asiri kufamba naJesu ari kupikisana naye kana kuti ari kutanga chitendero chenhema. Zviri pachena kuti murume wacho anotenda muzita raJesu, uye zviri kutaurwa naJesu zvinoratidza kuti murume uyu haasi kuzorasikirwa nemubayiro wake.
Asi kana vaapostora vakakanganisa kutenda kwemurume uyu kana kuti vakamugumbura nemashoko avo kana kuti nezvavakaita, vangave vakaita mhosva yakakura. Jesu anoti: “Munhu wose anogumbura mumwe wevaduku ava vanotenda, zvaizomunakira kwazvo kudai guyo rakaita seriya rinotenderedzwa nembongoro raizosungirirwa mumutsipa make obva akandwa mugungwa.” (Mako 9:42) Jesu anozoti vateveri vake vanofanira kubvisa chimwe chinhu chinokosha chakadai seruoko, tsoka, kana kuti ziso kana chichikanganisa kutenda kwavo kana kuti chichivagumbura. Zviri nani kusava nechinhu ichocho chinokosha wopinda muUmambo hwaMwari pane kuramba uinacho asi wozopedzisira wava muGehena (Mupata waHinomu). Vaapostora vanofanira kunge vakamboona mupata uyu uri pedyo neJerusarema unopisirwa marara, saka vari kunzwisisa kuti ari kureva kuparadzwa zvachose.
Jesu anonyeverawo kuti: “Chenjerai kuti hamuzvidzi mumwe wevaduku ava; nokuti ndinokuudzai kuti ngirozi dzavo dziri kudenga dzinogara dzichiona chiso chaBaba vangu vari kudenga.” “Vaduku ava” vanokosha zvakadini kuna Baba vake? Jesu anotaura nezvemurume ane makwai 100 asi anorasikirwa nerimwe chete. Anosiya 99 aripo kuti anotsvaga rinenge rarasika, uye paanoriwana anofara kupfuura zvaanoita ne99 aagara ainawo. Jesu anowedzera kuti: “Hachisi chinhu chinodiwa naBaba vangu vari kudenga kuti mumwe wevaduku ava aparare.”—Mateu 18:10, 14.
Zvichida achifunga nezvenharo dzanga dzichiitwa nevaapostora vake dzokuti ndiani mukuru, Jesu anovakurudzira kuti: “Ivai nomunyu mamuri, muchengete rugare pakati penyu.” (Mako 9:50) Munyu unoita kuti zvokudya zvinake. Munyu wokufananidzira unoita kuti zvinotaurwa nemunhu zvive nyore kugamuchira zvochengetedza rugare, panzvimbo pokuva nenharo.—VaKorose 4:6.
Dzimwe nguva panova nekutadzirana kwakakura, saka Jesu anotaura kuti pakadaro zvingaitwa sei. Anoti: “Kana hama yako ikatadza, enda ubudise pachena mhosva yake iwe naiye muri moga. Kana ikakuteerera, wawana hama yako.” Ko kana ikasakuteerera? Jesu anopa zano rokuti: “Enda nomumwe kana vamwe vaviri, kuti nyaya imwe neimwe isimbiswe kana papupurirwa nezvapupu zviviri kana zvitatu.” Kana izvozvo zvikaramba kushanda, taura “neungano,” kureva vakuru vakagadzwa avo vanogona kutonga nyaya yacho. Ko kana mutadzi wacho akasateererazve? Ngaave kwauri “somunhu wemamwe marudzi uye somuteresi,” vanhu vanoonekwa nevaJudha sevasingaiti kushamwaridzana navo.—Mateu 18:15-17.
Vatariri veungano vanofanira kunyatsotevedzera Shoko raMwari. Kana vakaona kuti mutadzi ane mhosva uye anofanira kurangwa, mutongo wavo ‘uchange watosungwa kudenga.’ Asi kana vakaona kuti haana mhosva, zvinenge ‘zvasunungurwa kudenga.’ Mirayiridzo iyi ichabatsira kana pazova neungano yechiKristu. Pakutongwa kwenyaya dzakakosha zvakadaro Jesu anoti: “Pane vaviri kana vatatu vakaungana muzita rangu, ini ndiripo pakati pavo.”—Mateu 18:18-20.
Nei murume ari kudzinga madhimoni asingafaniri kutorwa semunhu ari kupikisana naKristu?
Kugumbura mumwe wevaduku kana kuti kukanganisa kutenda kwake imhosva yakakura zvakadini, uye Jesu anoenzanisira sei kukosha kwevaduku ava?
Jesu anoti zvinhu zvinofanira kufambiswa sei kana hama ikaita chivi?